जग्गा लिने सोचमा हुनुहुन्छ ? वास्तु अनुसार यस्तो जग्गा उत्तम ! - GharGhaderi.com
जग्गा लिने सोचमा हुनुहुन्छ ? वास्तु अनुसार यस्तो जग्गा उत्तम !
नेपालमा विशेषगरी शहरी क्षेत्रका ९० प्रतिशत जग्गा वास्तुसंगत छैनन् । उत्तरतर्फ सीधा मिलेको वा जिरो डिग्रीमा परेको जग्गा भेटिँदैन । किनभने, बाटो जता फर्केको हुन्छ, घर पनि त्यतै फर्किन्छ । यदि बाटो उत्तर फर्केको छ भने घर पनि उत्तर नै फर्किन्छ । विदिशातिर फर्केको छ भने विदिशामै हुन्छ । यसरी जग्गा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ठ्याक्कै मिलेन भने यहाँ आधाजति ऊर्जा त्यत्तिकै नाश भएर जान्छ । किनकि, ठोक्किएर प्लटमा आउनुपर्ने ऊर्जा चिप्लिएर जान्छ । त्यसैले त्यस्ता जग्गा सकभर खरिद नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । तर, बिडम्बना, काठमाडौं त त्यस्तो जग्गा पाउनु झण्डै असम्भव नै छ ।
शुभ आकारको जग्गा
सकेसम्म चारपाटे (आयातकार अथवा वर्गाकार) मिलेको जग्गा राम्रो हुन्छ । त्यसमा पनि चौडाइभन्दा लम्बाइ दोब्बरभन्दा कम भए उत्तम हुन्छ । जस्तै– चौडाइ ४० फिट छ भने लम्बाइ ८० फिटभन्दा बढी हुनुहुँदैन । लम्बाइ चौडाइको दोब्बरभन्दा बढी भए इनर्जी नाश भएर जान्छ, जसले प्लटको पूरै एरियामा इनर्जी राम्ररी छरिन पाउँदैन ।
जग्गाको चारै कोण ९० डिग्री भएको अर्थात् वर्गाकार भएको जग्गा अत्यन्त राम्रो हुन्छ । वास्तुका दृष्टिले यस्तो प्लटलाई १० मा १० अंक दिन सकिन्छ । त्यस्तै, आयाताकारलाई १० मा ९ मानिन्छ । त्रिभुज आकारको जग्गा सबैभन्दा नराम्रो वा अशुभ हुन्छ । यो १० मा शून्य अंकबराबर नै हुन्छ । यस्तो जग्गा बिल्कुलै लिनुहुँदैन ।
जग्गाले पूर्वको इनर्जी बढी पाउन जरुरी हुन्छ । सबै दिशामा इनर्जी बढी हँुदा राम्रो हुन्छ भन्ने हुदैन । जग्गा उत्तरपूर्वी कोणमा अलि बढी निस्किएको भए अति शुभ हुन्छ । किनभने, यस्तो जग्गाले पूर्वको इनर्जी बढी पाउँछ । तर, अरु दिशामा जस्तै– दक्षिण–पश्चिम, उत्तर–पश्चिम आदि कोणमा बढी निस्कएको हुँदा राम्रो हुँदैन । तथापि कुनै पनि नराम्रो वा अशुभ मानिने आकारको जग्गा छ भने पनि त्यसलाई रेमिडि गरेर वास्तु मिलेको बनाउन सकिन्छ ।